बेलायतमा नेपालसम्बन्धी अनुसन्धाताहरूको जमघट - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
बेलायतमा नेपालसम्बन्धी अनुसन्धाताहरूको जमघट
नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक विषयदेखि प्राकृतिक विपत्तिससम्मका कार्यपत्रहरु प्रस्तुत
प्रजय शुक्ल लण्डन बैशाख १
बेलायतमा नेपालसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ताहरुको जमघट
बेलायतको एक कार्यक्रममा नेपाल सम्बन्धी अनुसन्धाताहरुले २२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राविधिक र स्वास्थ्यबारे भइरहेको अध्ययन र अनुसन्धानको सम्बन्धमा ब्रिटेन–नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलले बुधबार र बिहीबार गरेको १५औं नेपाल अध्ययन दिवसको कार्यक्रममा ती कार्यपत्र प्रस्तुत भएका हुन्।
लण्डनबाट ११० माइल दक्षिणमा अवस्थित बर्नमाउथ युनिभर्सिटीमा भएको कार्यक्रममा नेपाली र विदेशी प्राज्ञिक एवं विद्यार्थीहरू सहभागी थिए।
कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्ने सहभागी प्राज्ञ एवं विद्यार्थीहरूले नेपालबारे आफूले गरेका अनुसन्धान र अध्ययन बारे रिपोट बनाई पोस्टर पनि प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपालबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न बेलायतका डिएफआइडी, एनआइएचआर, वेलकम ट्रस्ट र एमआरसी लगायत विभिन्न संस्थाहरूले ठूलो लगानी गर्दै आएका छन्। बेलायतमा भएका नेपालसँग सम्बन्धित अध्ययन र अनुसन्धानले नेपाल र नेपालीको जीवनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हित भइरहेको सहभागीहरूले बताए।
बर्नमाउथ युनिभरसिटीका पव्लिक हेल्थका प्रोफेसर एडविन भ्यान टेनजिङ र युनिभरसिटीमै प्राध्यापन र अनुसन्धान गरिरहेका डा. प्रमोद रेग्मीले कार्यक्रमको समन्वय र व्यवस्थापन आफ्नो युनिभर्सिटीले गर्न पाएको खुशी व्यक्त गरे।
डा. रेग्मीले नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘नेपाल अध्ययन दिवसले बेलायतमा बसेर नेपालबारे अनुसन्धान गरिरहेका सबै प्राज्ञिक नेपाली र विदेशीलाई एक ठाउँमा ल्याउनुका साथै विचार आदान प्रदान गर्न सुनौलो मौका प्रदान गर्यो।’
नेपालको आरकिटेक्चर सम्बन्धी अनुसन्धान गरिहेकी स्पेनिस अनुसन्धानकर्ता अमारा रोका इग्लेसियसले नेपालबारे अनुसन्धान कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा हर्षित हुँदै भनिन्, ‘यो कार्यक्रमले मलाई नेपाल बारे अनुसन्धान गर्न थप उर्जा प्रदान गर्यो।’
लण्डनमा नेपालबारेका अनुसन्धाताहरु
कार्यक्रमको पहिलो दिन अक्सफोर्ड युनिभरसिटीका सोसल एनटोपोजीका प्रोफेसर डेभिड गेल्नरले संचालन गरेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा भएको सेसनमा लिभरपुल जोन मोर्स युनिभर्सिटीका डा. एकनारायण पौडेलले नेपालमा एचआइभी संक्रमितहरूले घर परिवार र काममा भोग्नु समस्या र आर्थिक कठिनाइबारे छलफल गरे।
एबरिस्टविथ युनिभरसिटीका लेक्चरर डा. देवराज आचार्यले नेपालका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा ज्ञान विकास र अध्यापन बारे धारणा प्रस्तुत गरे।
लिभरपूल जोन मोर्स युनिभरसिटीका डा. सारा पार्करले नेपालमा किशोरीहरूको स्वस्थ महिनावारीको लागि विकास गरेका विभिन्न स्यानिटरी प्याड प्रयोगबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्।
यस्तै युनिभरसिटी अफ लण्डनका नेपाली र हिमालयन अध्ययनका प्रोफेसर माइकल हट्ले दोस्रो सेसनमा संस्कृति, धर्म र पहिचानबारेको कार्यक्रम संचालन गरे। युनिभरसिटी अफ ग्लास्गोमा विद्यावारिधी गरिरहेकी कुमुदा राणाले नेपालमा समलिंगीहरूका समस्या र समान अधिकारका लडाइका लागि भएका पहलहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन्। यनिभरसिटी अफ दि वेष्ट अफ स्कटल्याण्डमा लेकचरर कल्याण भण्डारीले नेपालमा भएका जनजातिहरूले सगरमाथालाई राष्ट्रिय पहिचानको प्रतिकको रूपमा मान्ने अवधारणाबारे छलफल गरे। स्वानजी युनिभरसिटीमा विद्यावारिधी गर्दै गरेका रविन्द्र न्यौपानेले प्युठान, गुल्मी र बाग्लुङमा भएका राजनैतिक, सामाजिक आन्दोलन एवं धार्मिक आस्थाले पारेको प्रभाव बारे धारण प्रस्तुत गरे।
यस्तै सोसल साइन्स बहा, काठमाडौंमा अनुसन्धान गरिरहेका डा. जीवन बानियाले अरब मुलुकहरूमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक असर छलफल गरे। कार्यक्रमको तेस्रो सेसनमा मार्टिन चौतारीका डा. प्रत्युष वन्तले नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्न चाहनेहरूले भोग्नु परेका समस्या र निवारण आफनो धारण प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन व्रिस्ट्रल विश्वविद्यालयका डा. पुष्पराज पन्तले हालै भएको नेपालको स्वास्थ्य संरचनाको विकास र उपलब्धिबारे देखिएका चुनौतीबारे छलफल गरे।
यस्तै लिभरपुल जोन मोर्स युनिभरसिटीका सहायक डिन तथा प्रोफेसर पदम सिम्खडाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न अरबी देशहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे कार्यपत्र पेश गरे। युनिभरसिटी अफ वेष्ट अफ इंग्ल्याण्डका सन्तोष भट्टले वातावरण परिवर्तनले गरिब परिवारमा बाल दुर्घटना घटाउन सकिने आफनो अध्ययन प्रस्तुत गरे।
यस्तै लिभरपुल जोन मोर्स युनिभरसिटीका अनुसन्धानकर्ता डा. विभा सिम्खडाले नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको पेशागत विकास र बौद्धिक एवं कलाकौशल अभिवृद्धिका लागि तालिमहरूको आवश्यकताबारे छलफल गर्दै आफनो अध्ययन प्रस्तुत गरिन्।
यस्तै कार्यक्रमको दोस्रो सेसनमा स्वानसी युनिभरसिटीमा विद्यावारिधी गर्दै गरेका रामहरि पौड्यालले नेपालमा वैकल्पिक उर्जाहरूको प्रभाव र उपयोगबारे कार्यपत्र छलफल गरे। कार्यक्रममा युनिभरसिटी अफ लण्डनका नेपाली र हिमालयन अध्ययनका प्रोफेसर माईकल हट्ले ‘कसको सम्पदा ? नेपालको २०१५ को भूकम्प र धरहरा’ विषयक कार्यपत्र पेश गदै विगतका अनुभवबाट सिक्दै भविष्यमा हुन सक्ने विपत्तीबाट बच्नेबारे धारणा पेश गरे।
प्रकाशित १ बैशाख २०७४, शुक्रबार | 2017-04-14 09:48:46
लर्डसमा नेपालको खेल हेर्न अमेरिका र यूरोपका नेपालीको घुइँचो
नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई लण्डनमा सम्मान
नेपाल ब्रिटेन डटकमको ११औं वार्षिकोत्सवमा प्रबुद्ध ब्यक्तिहरु सम्मानित
नायक राजेश हमालले बेलायत पुगेर भनेः एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली
लर्ड्समा खेल्न आएको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई लण्डनमा स्वागत
लण्डनमा पारस वार्तामा र सन्दीप खेलमा
पत्रकार महासंघ बेलायतको अध्यक्षमा नरेश खपाङ्गीमगर
पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाको अधिवेशन मे १९ मा